Soomalidu Waxay Ku Maah Maahdaa (Waari Mayside War Ha Kaa Hadho) | HAYAAN NEWS
Soomalidu Waxay Ku Maah Maahdaa (Waari Mayside War Ha Kaa Hadho)
Halku dhagani waxa uu si kooban inoogu sheegayaa sida meelkasta oo aad joogto ama shaqo kasta oo aad hayso sida looga baahan yahay inaad inta itaalkaa ah ugu hagarbaxdo.
Sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa in aanad halka maanta aad joogto aanad bari joogayn.
Balse waxaad qabatay lagugu xasuusan doono
Waxaan uga socdaa hadalkayga.
Aba aan doonayaa inaan sifo kooban ka bixiyo
Waxqabadkii iyo wixii lagu xasuusan doono.
Wasiirka wasarada maaliyada marwo samsam cabdi Aadan oo sheegtay in ay dhalinyarada reer somaliland u banayn doonto si ay jaanis u siiso.
Ayaan jecelahay bal dhawr an is idhi waxa lagu xasuusan doonaa marwo samsam cabdi Aadan sxbayaal ila wadaagtaan.
Ugu horeyn maxaa wasiir samsam lagu xasuusandoonaa?
1:Hadii aynu su, aashan ka jawaabno.
Waxa lagu xasuusan doonaa waa wasiirkii ugu horeeyey ee haween ama dumar ah ee wasarada maaliyada loo magacaabo.
Islamarkaana muujisay kartida haweenka ku jirta iyadoo miisaaniyada qaranku kobocday sanadihii ay joogtay iyadoo waliba ay soo mareen dunuufo adag oo dhaqaale qaranka intii ay wasiirka ahayd sifiicana uga dabaalatay.
2:waxa sidoo kale lagu xasuusan doonaa. Doorkii waxtarnimada damqashada hooyo nimada lahaa ee ay isku garabtaagtay dadkeenii abaaaruhu saameeyeen oo lagu xasuusto iyadoo habeen iyo maalin fadhiisan wayday oo bulshada dhex socota
3:waxa kale oo aan la ilaabi karin gacantii laxaadka lahayd ee ay ku lahayd horumarka caafimaadka jsl taas oo mar walba hil iyo hoo laga rabtaagnayd wasarada caafimaadka siduu wasiirka caafimaadku ii sheegay in ay galin jirtay miisaaniyada wasarada maaliyada
Ay mararka qaar anbalaasyo ku soo iibiso
Kuwaas oo lagu badbaadiyo hooyada iyo dhalaanka.
Qaybtii lama ilaawaanka aheyd ee wakhtigii shuban biyoodku ka dilaacay dalka ay ka qaadatay
4:waxaan la inkiri karin go, aankii kalsoonida lahaa ee markii qaadhaan bixiyaashu ay joojiyeen dhaqaalihii ku baxayey diwaangalintii cobixiye yaasha iyo tii doorashadaba ay si degdeg ah u keentay si dalka doorashada madaxtooyadu uga dhacdo.
5:waxaan la ilaawidooni marnaba waa wasiirkii ugu horeeyey ee iyadoo doorasho lagu jiro shaqaalaha dawlada iyo ciidamada qarankee kala duwan mushaarkoogii qaataan wakhtigii ay awal hore u qaadan jireen .
Sxbayaal waxyaabaha wasiir samsam cabdi Aadan lagu xasuusan doono ku ma sookoobi karno hadal qoraal.
Isku soo wada duuboo marwo samsam cabdi Aadan waxay tusaale u tahay guud ahaan gabdhaha somaliland kartida ku jirta oo ah mid aan la dafiri karin dalkana wax weyn ka taraya Hadii la dhiiri galiyo